Mpanamboatra lamba sy mpamatsy lamba vita amin'ny alimoara vita amin'ny alim-bolan'ny alim-bary - China Aluminium Foil Fiberglass Fabric Factory
Lamba mirehitra vita amin'ny alim-pito vita amin'ny alimoara
Fireproof Aluminium Foil Fiberglass Cloth dia aluminium foil sy fiberglass lamba mifangaro fitaovana. Amin'ny alàlan'ny teknolojia fitambarana tsy manam-paharoa sy mandroso, ny velaran'ny alimina ao anaty ny fitambaran-javatra dia malama, madio ary avo taratra, miaraka amin'ny GB8624-2006 toy ny fenitra fanaraha-maso.
Lamba vita amin'ny verinia vita amin'ny veromanitra vita amin'ny verinia
Aluminium Foil Laminated Fiberglass Cloth dia aluminium foil sy fiberglass lamba mifangaro fitaovana. Amin'ny alàlan'ny teknolojia fitambarana tsy manam-paharoa sy mandroso, ny velaran'ny alimina ao anaty ny fitambaran-javatra dia malama, madio ary avo taratra, miaraka amin'ny GB8624-2006 toy ny fenitra fanaraha-maso.
Aluminium Coated Fiberglass Fabric dia aluminium foil sy fiberglass lamba mifangaro fitaovana. Amin'ny alàlan'ny teknolojia fitambarana tsy manam-paharoa sy mandroso, ny velaran'ny alimina ao anaty ny fitambaran-javatra dia malama, madio ary avo taratra, miaraka amin'ny GB8624-2006 toy ny fenitra fanaraha-maso.
Fiberglass Aluminium dia aluminium foil sy fiberglass lamba mifangaro fitaovana. Amin'ny alàlan'ny teknolojia fitambarana tsy manam-paharoa sy mandroso, ny velaran'ny alimina ao anaty ny fitambaran-javatra dia malama, madio ary avo taratra, miaraka amin'ny GB8624-2006 toy ny fenitra fanaraha-maso.
Aluminium Fiberglass dia aluminium foil sy fiberglass lamba mifangaro fitaovana. Amin'ny alàlan'ny teknolojia fitambarana tsy manam-paharoa sy mandroso, ny velaran'ny alimina ao anaty ny fitambaran-javatra dia malama, madio ary avo taratra, miaraka amin'ny GB8624-2006 toy ny fenitra fanaraha-maso.
lamba fiberglass aluminized dia aluminium foil sy fiberglass lamba mifangaro fitaovana. Amin'ny alàlan'ny teknolojia fitambarana tsy manam-paharoa sy mandroso, ny velaran'ny alimina ao anaty ny fitambaran-javatra dia malama, madio ary avo taratra, miaraka amin'ny GB8624-2006 toy ny fenitra fanaraha-maso.
Aluminium Foil Coated Fiberglass Cloth dia tena natao tamin'ny alàlan'ny teknika manokana amin'ny alàlan'ny teknolojia manokana mifamatotra fireproofing izay niforona tamina membrane matevina, manana faritra marevaka sy taratra manjelanjelatra ambony izy ary tanjaka mahery, fahaizan'ny famehezana tsara, ary entina manamarina ny entona, ary tsy mahazaka rano.
Aluminium Fiberglass Cloth dia fiarovana tonga lafatra amin'ny fanaronana fitaovana izay akaiky ny loharano mamirapiratra toy ny takelaka metaly mafana, metaly na vera na metaly na vera, lelafo / plasma misokatra na setroka mandreraka ny motera. Miaro tariby indostrialy, tariby, fantsom-pifandraisana, kabine sy valizy sy fitaovana arofanina.
Lamba lafaoro vita amin'ny aluminized
Aluminized Fiberglass Fabric dia vita amin'ny fiberglass lamba laminated foil aluminium na sarimihetsika amin'ny lafiny iray. Izy io dia afaka mahatohitra hafanana mamirapiratra, ary manana faritra malama, tanjaka avo, fitaratra manjelanjelatra tsara, fanamafisana famehezana, porofon-tsolika ary porofon-drano. Ny hatevin'ny foitra alimo dia avy amin'ny 7micro ka hatramin'ny 25 micro.
Lamba lamba vita amin'ny ravin-kazo vita amin'ny kofehy, Lamba vita amin'ny acrylic Fiberglass, Fiberglass mifono akrilika, Lamba vita amin'ny vera vita amin'ny acrylic, Clot Fiberglass, Lamba Fiberglass Aluminized,